HomeHoryaalladaSaxaafada Spain Maxay Ka Tidhi Kulankii El Clasico Ee Real Madrid Vs Barcelona
Saxaafada wadanka Spain ayaa fallooyin badan ka qoray kulankii dhex maray labada kooxood ee Real Madrid iyo Barcelona, kaas oo ay kooxda Barcelona ku adkaatay 4 gool halka Real Madrid ay la timid 3 gool.
Saxaafadda taageerta Barcelona iyo kuwa Real Madrid la safan ayaa si aad ah u qaadaa dhigay qaab-ciyaareedkii labada kooxood, kii labada xiddig ee Lionel Messi iyo Ronaldo, iyo natiijadii ciyaartu ku dhamaatay.
Jariidada El Mundo Deportivo ayaa qortay: Messi iyo Iniesta oo sharci ka dhigay aammusiinta reer Bernabeu iyadoo Messi uu dhaliyay seddexley taariikhda gali doonta.
Sport: hogaamiye Messi oo soo nooleeyay rajada Barcelona Ee horyaalka
La Vanguardia: wiilasha Martino oo Bernabeu ka soo hooyay guul muhiim ah, guul looga mahad celinayo Iniesta iyo Messi kuwaas oo kooxda ku hogaamiyay rajada ay ugu tartami karaan horyaalka.
El Periodico: Barcelona oo baabi’isay Real Madrid.
El Pais: waxay ahayd ciyaar sare oo wadata Messi dib u soo noqoshadisa iyo Iniesta, ka hor ciyaarta guusha Barca shaki ayaa ku jiray, lakiin bahaladi ayaa hurdada ka soo kacay.
Marca: Barcelona oo dib u soo kicisay rajadeeda horyaalka iyadoo ku ciyaaraysa Bernabeu, kaddib markii ay badiyeen El Clasico muran dhalisay, guushan ayaa noqonaysa mid shaki galinaysa Real Madrid oo ku guul daraysatay inay ka badiso Barca iyo Atletico labadaba.
Tababarihii Ugu Horeeyey ee Ajanabi Ah ‘Van Gaal’ Oo Si Rasmi Ah Loogu Magacaabay Tababaraha Cusub Ee United
Ciyaaryahan Marc Bartra Oo markii ugu horreysay ka hadlay Sababtu uga dheereeyey Gareth Bale Finalkii Copa Del Rey